नेकपा फुटको संघारमा : राजीतिक विश्लेषक - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
हुमाकान्त पोखरेल - October 1, 2020 0
नेपाल-भारत सीमा नाका खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
सुजीतकुमार झा - October 1, 2020 0
जनकपुरधाम । सीमा बन्द हुँदा दुवै देशको जनतालाई कठिनाई भइरहेको खबर आइरहेको बेला नेपाल–भारत खुल्ला सीमा सम्वाद समूह र व्यापारीहरुको संस्थाले नेपाल-भारत सीमा खोल्न...
रुपन्देही र बाँकेमा कोरोनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु
रासस - October 1, 2020 0
बुटवल । रुपन्देही र बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण चार जनाको मृत्यु भएको छ । रुपन्देहीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार बेलुका मृत्यु भएका...
दोलखाका शैक्षिक संस्था पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन
दोलखा । जिल्लामा कोरोनाको लक्षणसहितका सङ्क्रमित फेला परेपछि जिल्ला कोभिड –१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आजदेखि शैक्षिक संस्था पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको...
निगम भन्छ : नेपाली पाइलटले नै धेरै तलब बुझ्छन्
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले विदेशी विमानचालक (पाइलट) ले भन्दा नेपाली पाइलटले धेरै तलब बुझ्ने गरेको जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको...
शंकरदास वैरागी मुख्यसचिव, रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस
राजधानी संवाददाता - October 1, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवमा शंकरदास वैरागीलाई नियुक्त गरेको छ । विहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैरागीलाई नयाँ मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । मुख्यसचिव लोकदर्शन...
महेश्वर गौतम - October 1, 2020 0
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न संविधानअनुसार दलको संघीय संरचना अनिवार्य गरेको छ । आयोगले संविधानमा भएको संघीय संरचनाअनुसारको मुलुकको ढाँचाको स्वरूपसहित...
राजधानी समाचारदाता - September 30, 2020 0
ओली र दाहालबीच अझै जुट्न सकेन सहमति
राजधानी समाचारदाता - September 29, 2020 0
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सरकार पुनर्गठन विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकिरहेको...
सुभाष साह - September 28, 2020 0
रानीपाखेरीको गजुरमा २८ तोला सुन, आज गजुर प्रतिस्थापन गरिने
Kumar Raut - October 1, 2020 0
काठमाडौं । रानीपोखरी पुनर्निर्माणसँगै बिच भागको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आज बिहीबार बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सुनको गजुर प्रतिस्थापन गरिदै छ । गजुरमा...
निराजन पौडेल - October 1, 2020 0
काठमाडौं । विशेष अदालतले घूस खुवाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परीक्षामा उत्कृष्ट अंक पाएका विद्यार्थी र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कैद र जरिमाना हुने फैसला सुनाएको...
राजधानी समाचारदाता - October 1, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइँदै छ । रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी...
प्रशान्त वली - October 1, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस परीक्षणका नाममा निजी अस्पतालहरूले ठगी धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कविपरीत निजी अस्पतालले प्रतिपरीक्षण चार हजार रुपैयाँसम्म शुल्क...
बलात्कारीलाई सजायँ : मृत्युदण्ड !
काठमाडाैं । सांसद्ले नेपालमा बलत्कारको घटनामा पीडकलाई सजाय पर्याप्त नहुँदा उनीहरु घटना हुनु पहिले नडराएकाले मृत्युदण्डको सजायको माग गरेका छन् । उनीहरुले कानून कार्यान्वयन...
पोखरामा डेढ अर्ब लागतमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्ने
विजय नेपाल - October 1, 2020 0
पोखरा । पर्यटनको राजधानी पोखरा पछिल्लो समय खेलकुद सहरको रुपमा समेत विकसित हुँदै गएको छ । खेलकुद–पर्यटन दुवैमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको पोखरामा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय...
भालाडोलिडविरुद्ध रियालको जीत
एजेन्सी - October 1, 2020 0
मड्रिड । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड विजयी भएको छ । गएराति भएको खेलमा रियलले रियल भालाडोलिडलाई १–० ले हराएको हो । रियलको जितमा...
राजस्थानविरुद्ध कोलकाताको सजिलो जीत
युएइ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा राजस्थान रोयल्सविरुद्ध कोलकत्ता नाइट राइडर्सले सजिलो जित निकालेको छ । राजसंस्था ३७ रनले पराजित...
एजेन्सी - September 30, 2020 0
लन्डन । पोर्चुगल तथा पोर्चुगिज क्लब बेन्फिाका डिफेन्डर रुबेन डायस इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी आउन सहमत भएको छ । सिटीको क्लब इतिहासकै कीर्तिमानी मूल्य...
दिल्लीविरुद्ध हैदरवादको जीत
युएइ । इण्डिन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद विजयी भयो । अबुधावीमा खेलिएको खेलमा दिल्लीविरुद्ध हैदरावाद १५ रनले...
डा. देवीप्रसाद आचार्य - October 1, 2020 0
समाजमा झाँगिदो नकारात्मक प्रवृत्ति
पुष्करराज प्रसाईं - October 1, 2020 0
आजकल नेपाली समाजमा एक प्रकारको नकरात्मक प्रवृत्ति झाँगिदै गएकोे छ । अरूले गरेको राम्रो रचनात्मक कार्यलाई नदेख्ने र अरूप्रति शुभेच्छा पनि नचाहने उल्टै भ्रम...
ज्येष्ठ नागरिकको जागरूकता दिवस
विश्वनाथ खरेल - October 1, 2020 0
प्रत्येक वर्षको अक्टोवर १ तारिकका दिन विश्व समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस विश्वभरि मनाइन्छ । यस वर्ष भने कोरोना कहरको कारण संसारभरि कोलाहालपूर्ण अवस्थामा...
बलात्कारविरुद्ध महिला सशक्तीकरण जरुरी
लकडाउनका बेलामा दर्ता भएका बलात्कारका केसहरूमाथि गरिएका अध्ययन तथा अनुसन्धानले महिला र बालबालिका आफ्नै घर तथा आसपासमै असुरक्षित हुन थालेको देखाएको छ, जुन निकै...
यिनै हुन्, राम नेपालका छोरा भन्ने आधार
श्रीप्रसाद प्रसाईं - September 30, 2020 0
विश्वासमा आधारित राम जन्मभूमि फैजावादस्थित अयोध्या हो भने प्रमाणमा आधारित राम जन्मभूमि चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरी नै हो । अयोध्यापुरीप्रतिको जनआकर्षण र विश्वास पछिल्लो समयमा...
लिला बल्लभ नेपाल - October 1, 2020 0
Home राजनीति नेकपा फुटको संघारमा : राजीतिक विश्लेषक
By सुभाष साह
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेका राजनीतिक विश्लेषकहरुले दावी गरेका छन् ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारी र वाढीपहिरोले पीडित बनेका सर्वसधारण जनताको समस्या सम्बोधनमा ध्यान दिनु भए पनि सत्तारुढ दलका नेताहरु आफै झगडा गर्नुले पार्टी नै फुटको नजिक पुगिसकेको दावी उनीहरुको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले नेपका भित्रको घरझगडा अराजनीतिक रहेको बताए । नेकपाले दावी गर्दै आएको सिद्धान्त, विचार अनुसार कुनै कार्यक्रम नभएको उनले बताए । समाजवादको स्थापना गर्ने भन्ने तर व्यवहारमा पुँजीवादी चरित्र नै प्रदर्शन गरिराख्ने हो भने नाम मात्रको कम्युनिष्ट मात्रै हुने उनको दावी छ ।
‘नेकपा भित्र भईरहेको लडाईको भित्री चुरो कुरो उहाँहरु अराजनीति हुनुहुन्छ । विधि, विधान निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सोचले समाजवाद आउँदैन्’ रोक्काले भने, ‘पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नै मिटिङ डाक्दिन, बैठकमा जादिन भन्नु लोकतान्त्रिक विधि विपरित हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले नेपका भित्रको घरझगडा अराजनीतिक रहेको बताए । नेकपाले दावी गर्दै आएको सिद्धान्त, विचार अनुसार कुनै कार्यक्रम नभएको उनले बताए
पार्टीभित्र जुन समस्या देखिएको छ त्यो छलफल, बहसकै माध्यमले समाधान हुने हो । तर महिनौ हुँदा बैठक अनिर्णयको बन्दी बनाउँनुले पार्टी, जनता र मुलुककै लागि शुभसंकेत नभएको रोक्काले बताए ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्राले झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहितको जनमत प्राप्त पार्टीको सरकार भए पनि कार्यशैली सोही अनुसारको नभएको बताए । प्राप्त जनमतको अपमान गर्ने काम भईरहेको बताउँदै उनले जनताको समस्या, पीडा एकातर्फ छ तर पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली ठिक त्यसको विपरित रहेको उनले बताए ।
मुलुक र जनता अहिले कोरोना भाइरस, वाढीपहिरो समस्याले पीडामा रहेको बताउँदै उनले सत्तारुढ दलका नेताहरु घरझगडामा रमाईरहेको वताए । मुलुक र जनताको समस्या समाधान र विकाशका काम गर्न नसक्ने नेताहरु अहिले एकले अर्कोलाई दोष देखाउँने र आफू पंछिने काम गरिरहेको वताए ।
‘राष्ट्रवादको अक्सिनमा पार्टी सञ्चालन भईरहेको छ । राष्ट्रवादको लेपले बढी दिन टिक्न गाहरो हुन्छ’ मिश्राले भने, ‘मुलुक र जनता पिडामा भएको बेला सत्तारुढ दलका नेताले गरिरहेको झगडा झण्डै दुई तिहाई जनमतको अपमान मात्रै हो ।’
अहिलेको तत्कालिन समस्या समाधानका साथै विकास निर्माणका सवालमा सरकार पुर्ण रुपमा असफल भईसकेको दावी उनको छ । सोही कारण नेकपामा अहिले बहस शुरु भएको छ । सरकारको गतल कार्यशैलीको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रश्न गम्भिर रुपले उठेको बताउँदै अहिले एकले अर्कोलाई दोष देखाउँने काम भईरहेको बताए ।
दुई फरक कार्यशैली र पृष्ठभुमी भएको पार्टीका बीचमा एकिकरण भए पनि नेताहरुको शैली स्वेच्छाले अगाडी बढनु नै रहेको छ । पार्टीमा छलफल र बहस नगर्ने, पार्टीलाई आफू अनुकुल हुने गरी अगाडी बढाउँने भएपछि त्यहाँ विवाद अवश्य उठने दावी उनको छ ।
नेताहरुका बीचमा अहिले अविश्वास छ । एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै उनले यस बीचमा कुनै चमत्कार भए पार्टी जोगिन सक्ने बताए । अहिले आन्तरिक छलफल समेत नभएकाले अवस्था जटिल बन्दै गएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागसंगै शुरु भएको विवाद अझै लम्बिने संकेत बिश्लेषकहरुको छ । दाहाल र नेपाल समुहले पार्टीमा विधि र पद्धति मिचिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर ओली समुहले अहिलेको झगडा पद प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ गरिएको जनाएको छ
सत्तारुढ नेकपा भित्र गत बैशाखदेखी विवाद तिब्र रुपमा शुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली माथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालले प्रश्न उठाउँदै प्रहार शुरु गरेका थिए ।
सरकारको कार्यशैलीमाथि पार्टीकै नेताले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बचाउँ गर्दै आएका छन् । विवादकै बीच गत १० असार देखी स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएको छ । तर कुनै निर्णय नै नगरी बैठक अनिश्चित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागसंगै शुरु भएको विवाद अझै लम्बिने संकेत बिश्लेषकहरुको छ । दाहाल र नेपाल समुहले पार्टीमा विधि र पद्धति मिचिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर ओली समुहले अहिलेको झगडा पद प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ गरिएको जनाएको छ ।
नेकपा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालका साथै वरिष्ठ नेताद्धय खनाल र नेपाल सहितका नेताहरु आ–आफ्नै रणनीति र अडानमा अडिग रहेकाले अहिलेको समस्या समाधानमा ढिलाई भएको नेकपा नेताहरु बताउँदै आएका छन् ।
कार्यालय सहयोगीले ‘मैले नै हो नागरिकता सिफारिस गर्ने’ भन्दै घुस लिएपछि
प्रमुख सुजीतकुमार झा - October 1, 2020 0
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ का कार्यालय सहयोगी दिलिप पञ्जियारलाई अख्तियारको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा...
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - October 1, 2020 0
प्रदेश ५ रासस - October 1, 2020 0
मुख्य सचिव रेग्मीले दिए राजीनामा
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 1, 2020 0
काठमाडौँ । मुख्सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएका छन् । रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै राजीनामा दिएका हुन् । बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष...
सौजन्य लिला बल्लभ नेपाल - October 1, 2020 0
प्रदेश ५ हुमाकान्त पोखरेल - October 1, 2020 0
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने
Editor-Picks निराजन पौडेल - April 27, 2020 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघि भएको फैसला...
म्यान्यु र चेल्सी छनोट
खेल एजेन्सी - July 28, 2020 0
लन्डन । म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सी इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष चारमा रहँदै अर्काे सिजनको लागि यूईएफए च्याम्पियन्स लिगमा छनोट भएको छ । युनाइटेड र...
श्रीलंकामा ३ दिने कर्फर्यु, निर्वाचन स्थगित
विदेश एजेन्सी - March 20, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि दक्षिण एसियाली मुलुकहरु पनि थप सतर्क हुन थालेका छन् । ...
प्रदेश ५ श्रीकृष्ण सिग्देल - July 3, 2020 0
Editor-Picks रासस - October 1, 2020 0
काठमाडौं । इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै इजरायली श्रम बजार नेपाली युवाका लागि खुला भएको छ । नेपाल...
प्रहरीमा एक वर्ष नपुगी सरुवा नहुने
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - October 1, 2020 0
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारी सरुवा पुरानो संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । २०६९ मा जारी प्रहरी कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड संशोधन गर्दै...
Editor-Picks महेश्वर गौतम - October 1, 2020 0
पाेहाेर १४ हजार बाेका बली दिइएकाे मन्दिरमा यसपाली क्षमा पूजा मात्रै
Editor-Picks सुजीतकुमार झा - September 30, 2020 0
जनकपुरधाम । जनकपुरधामको प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा यसपाली बली प्रदान नहुने भएको छ । उक्त मन्दिरमा अष्टमी रातीमा विशेष बली प्रदान हुँदै आएको छ...